China Dual nzube spana, ratchet sọrọ-nzube spana, ibughari isi ratchet spana, abụọ na-emeghe spana, igbe spana, kemeghi spana factory na Nsukka | Boda
Dual nzube spana, ratchet sọrọ-nzube spana, ibughari isi ratchet spana, abụọ na-emeghe spana, igbe spana, mgbanwe spana
Nkuzi na ngwa nke spanner:
A na-ekewa spanụ ụzọ abụọ, ọnya ndị nwụrụ anwụ na ndụ. Nke mbụ na-ezo aka na spana nwere ọnụọgụ edepụtara na ya, ebe nke ikpeazụ bụ ncha nwere ike ịgbanwe.
1. Solid spanner: otu njedebe ma ọ bụ abụọ na nsọtụ na-mere na oghere nke ofu size, nke a na-eji ịghasa akụ ma ọ bụ bolts nke ụfọdụ size.
2. Box spanner: ma nsọtụ nwere hexagonal onu ma ọ bụ iri na abụọ akuku onu na-arụ ọrụ ọgwụgwụ, adabara warara na-arụ ọrụ ohere, enweghị ike iji nkịtị spana oge.
3. Ntughari uzo abuo: otu njedebe bu otu ihe dika otu ihe siri ike, njedebe nke ozo di ka ihe ntanaka mgbanaka, na ihe nkpuchi ma obu nkpuru nke otu nkọwa di iche na uzo abuo.
4. Kemeghi spanner: oghere obosara nwere ike gbanwee n'ime a ụfọdụ size nso, na ike ga-eji na-atụgharị bolts ma ọ bụ akụ nke dị iche iche nkọwa. Ihe nhazi nke uzo ahu bu na etinyere ya na agha ya nke nwere ezé di nma; otu njedebe nke agba a na-akpali akpali ka emere ka ọ dị larịị; a na-eme ka isi nke ọzọ na-agbaji concave na ezi ezé; site na ịpị ikpuru ahụ, enwere ike iwepụ agba agba a na-ebugharị ngwa ngwa wee gbanwee ọnọdụ nke agba ahụ.
5. nko spanner: makwaara dị ka mpekere onwa spana, eji na-atụgharị na ọkpụrụkpụ nke anaghị ekwe ewepụghị aku.
6. Ogwe aka: ọ nwere ọtụtụ ntọala nwere oghere hexagonal ma ọ bụ oghere iri na abụọ, ma kwadebe ya na njikwa, mgbatị na ngwa ndị ọzọ. Ọ dabara adaba maka nkedo ma ọ bụ mkpụrụ nwere ọnọdụ nkedo dị warara ma ọ bụ nkụda mmụọ miri emi.
7. Hegzagon spana: L-ekara hegzagon mmanya spana, eji mee ihe maka ịtụgharị hegzagon kposara. Ihe nlere nke oghere hexagon na-adabere na nha nke akụkụ ọzọ nke hexagon, na nha ihu nwere ụkpụrụ mba. Nzube: ejiri ya mee ihe maka ijighari ma obu iwepu nkpuru osisi di iche iche na igwe, ugbo ala na akụrụngwa.
8. Ntughari uzo: o nwere ike gosiputa ihe eji eme ihe mgbe ichoghari bolt ma obu nut; ma ọ bụ mgbe torque etinyere ruru uru ahụ akọwapụtara, ọ ga-ezipụ ọkụ ma ọ bụ ụda olu. A na-eji mpempe mpempe akwụkwọ maka mgbakọ ahụ na ọnụọgụ akọwapụtara.
Ngwa nke nchikota uzo: nnukwu ihe eji emeputa uzo abuo kwesiri maka mmanu mmanu, kemikal, ihe ndi ozo, omumu ike, nchacha mmanu, ulo ugbo, ihe ndi ozo na ulo oru ndi ozo. Ọ bụ ngwaọrụ dị mkpa maka ntinye akụrụngwa, ngwaọrụ na mmezi akụrụngwa. Ejiri ụzọ mkpịsị aka abụọ wee banye na sistemu metric na sistemu bekee. Ihe eji emee uzo abuo na uzo abuo: uzo uzo abuo ka eji eme ihe dika 45 ma obu 40Cr alloy steel. Standardrụpụta ọkọlọtọ nke abụọ nzube spana: GB / t4392-1995 (percussion siri ike spana na percussion igbe spana). Njirimara uzo nkpuchi abuo: uzo uzo abuo ma obu nchikota abughi ihe eji emeputa ihe di elu ma obu akwa nchara. O nwere njirimara nke imewe ezi uche, usoro siri ike, njupụta ihe dị elu, nguzogide mmetụta siri ike, enweghị mpịachi, na-aga n'ihu, enweghị ekwe, oke ogo ziri ezi na ogologo oge.
1. Chromium vanadium ígwè: akara kemịkal CR-V, nke kachasị mma na nchara.
2. Carbon nchara: ogo bu ihe zuru oke, ma enwere otutu ahia.
Mkpọchi bụ ụdị nke a na-ejikarị echichi na iwepụ ngwaọrụ na ndụ, nke a na-eji agbanye bolts ma ọ bụ mkpụrụ.
E nwere ihe abụọ dị iche iche nke spanners, ofu spana na mgbanwe spana. Nke mbụ na-ezo aka na spana nke edere na ọnụ ọgụgụ a kapịrị ọnụ, nke a makwaara dị ka eriri siri ike, na nke ikpeazụ bụ ncha edozi.
Enwere ike idozi oghere imeghe nke spana ahụ a na-akwagharị n'ime ebe ụfọdụ. Ọ bụ ngwá ọrụ maka ịkwado na ịtọghe mkpụrụ na bolts nke nkọwa dị iche iche. A na-ejikọ eriri igwe nwere ike idogharị na isi na isi ya, isi ya na egbugbere ọnụ ya na-agagharị agagharị, egbugbere ọnụ siri ike, ọnụ efere, turbine na pin
Nwụrụ anwụ spanner makwaara dị ka siri spana, tumadi kewara abụọ isi siri ike spana na otu isi siri ike spana. Ọ nwere ọrụ dịgasị iche iche, ọkachasị na mmezi igwe, akụrụngwa, mma ụlọ, nrụzi ụgbọ ala na ndị ọzọ. Igwe ihe eji eme okpukpu abuo bu ihe ndi ozo, nke di nkpa maka ichikota igwe ma obu ihe ndi ozo, ugbo njem na ugbo oru ugbo.
Nke gara aga: Woodworking hụrụ agụba, aluminum hụrụ agụba, carbide hụrụ agụba, ịcha ngwaọrụ
Osote: Hegzagon spana, ewepụghị isi hegzagon spana, igbe hegzagon spana, bọl ụdị hegzagon spana
Hegzagon spana, ewepụghị isi hegzagon spana, igbe h ...
Mkpa, ịkwanyere mkpa, ịkwanyere cutter, mmiri anwụrụ ...
Pipe spana, oké ọrụ plastic anwụrụ spana, adj ...
Steel file ngwaọrụ, ígwè file, tara mmiri ígwè fi ...
Scraper, putty mma, osisi ahụ, plastic ha ...
Ọkwa, magnetik larịị, aluminum larịị, alloy lev ...